Redmi K20: Nkọwapụta, ọnụahịa na mwepụta gọọmentị | Gam akporosis
Na-esote K20 Pro anyị na-achọta ekwentị ọzọ na mmemme ngosi a nke akara ndị China. Ọ bụ ihe gbasara Redmi K20, ihe nlere nke di otutu izu anyị chere na ọ bụ njedebe-ya, ọ bụ ezie na ọ bụ akpatre ya nlereanya maka adịchaghị ufọt ufọt. Ihe na anyị maara n'oge na-adịbeghị anya ihu igwe. Ekwentị a nwere ọtụtụ akụkụ dị iche iche na ụdị Pro nke akara ndị China gosipụtara na mmemme a.
Nhazi ahụ bụ otu ihe na nke a. Ya mere, Redmi K20 a jiri igwefoto na-agba ọsọ na-abịa, enyo nwere obere eserese yana o nwekwara kamera azụ atọ. Otu n'ime ndị isi iche bụ processor ojiji na ekwentị. Mana mgbanwe dị ole na ole n’etiti ha abụọ.
Ogologo n'etiti etiti bụ akụkụ nke toro ọtụtụ kemgbe afọ gara aga. Ọtụtụ ụdị na gam akporo egosila ụdị n'ime akụkụ a. Ọzọkwa Redmi hapụrụ anyị ugbu a ihe nlereanya nke nwere ọtụtụ ikike na ya. Na mgbakwunye, ọ na-abịa nnukwu uru maka ego.
1 Nkọwapụta Redmi K20
Nkọwapụta Redmi K20
Na teknụzụ ọkwa anyị nwere ike ịhụ nke ahụ Redmi K20 a nwere otutu ihe ya na usoro di elu nke edere n'otu ihe omume. Nhazi ahụ bụ otu, ya na otu ihuenyo ahụ, igwefoto na batrị ya. Nchikota nke RAM na nchekwa ma obu ihe nhazi di iche na nke a. Ndị a bụ nkọwa nke ekwentị:
Nhazi: Qualcomm Snapdragon 730
Redmi K20 a bụ otu n'ime ekwentị izizi dị na ahịa iji nweta Snapdragon 730. Ọ bụ otu n'ime ndị na - arụ ọrụ na nso nso a site na Qualcomm, ọhụrụ gị adịchaghị n'etiti-nso processor. Ezubere ihe nhazi a maka egwuregwu, nke mere na ekwentị dị n'etiti etiti nwere ike zuru oke, yana ezigbo njikwa batrị, iji nwee ike igwu egwu n'ụzọ kachasị mma. Maka batrị ahụ, akara ndị China na-eji otu ihe ahụ dị na njedebe dị elu, nwere ikike nke 4.000 mAh. Anyị nwekwara A gam akporo dị ka sistemụ natively.
Igwefoto bụ otu nke anyị hụrụ na njedebe dị elu. Ya mere, anyị nwere igwefoto azụ atọ, 48 + 13 + 8 MP. Na mgbakwunye, igwefoto MPN 48 eji ihe mmetụta Sony IMX586 Sony. Nke a pụtara na ngwaọrụ ahụ nwere ezigbo igwefoto 48 MP, nke ga-enye gị ohere iji foto buru ibu were ya. Redmi K20 a na-ejikwa ihe mkpịsị aka mkpịsị aka na ihuenyo, nke na-amalite ịmalite ịdị n'etiti etiti oge, na mgbakwunye na ịmeghe ihu. Dị ka ama dị elu, ọ nwekwara NFC iji kwụọ ụgwọ ekwentị.
Dị ka mere na ekwentị ọzọ, nke a ugbua ka ewepụtarala Redmi K20 na China. Ọ bụ ezie na ruo ugbu a, anyị enweghị ozi ọ bụla gbasara mmalite ekwentị nke ekwentị. Olileanya na a ga-enwe akụkọ na nke a n'oge na-adịghị anya, n'ezie site na Xiaomi. Ma anyị ga-echere na nke a.
Ngwaọrụ a ga-ebupụta na agba atọ na ụlọ ahịa: pink, acha anụnụ anụnụ na nwa. Ọ bụ ezie na anyị nwere njikọta abụọ, nke dị iche na oke nchekwa. E gosiputala ọnụahịa nke ụdị abụọ a nke Redmi K20 na China. Ya mere, anyị nwetara echiche banyere ihe anyị nwere ike ịtụ anya site na ekwentị:
Ejiri usoro 6/64 GB jiri ọnụahịa nke 1999 yuan (euro 259 gbanwee)
Ihe nlere anya nke 6/128 GB di na 2099 yuan (euro 272 na mgbanwe)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Redmi K20: Uzo di elu nke akara a di ugbu a
Samsung weputara mbipute puru iche nke Galaxy S10 + Olympic Edition